Showing 1-20 of 3,656 items.
एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले आज (बिहिबार) बलियो प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बंगलादेशको ढाकामा आयोजित प्रतियोगितामा समूहको पहिलो खेलमा नेपालले भारतसँग खेल्न लागेको हो । &nbsp; प्रतियोगिताम�
सांस्कृतिक सहर भक्तपुर, सम्पदामा धनी सहर&ndash; दुबै भौतिक तथा अमूर्त सम्पदामा धनी। सम्पदायुक्त सहरमा अझ अवसर पनि विशेष भए त झन्, सुनमा सुगन्ध। यस्तै अवसर जुर्&zwj;यो, भक्तपुरमा सकिमना पुन्हिको दिन। सकिमनाको नेपालभाषामा शाब्दिक �
काठमाडौं, कात्तिक २८ गते। आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहका ४८ पदका लागि हुने उपनिर्वाचनमा २८१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, ३५ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा विभिन्न ४८ पदका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर�
विराटनगर, कात्तिक २८ गते। अवैध यौन धन्दामा लगाउने एक जना भारीतय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरकोे छ । विराटनगर क्षत्रेको होटलमा अवैध रूपमा यौन धन्दामा लगाउने भारत बिहार घर भएका ४५ वर्षिय मो. रियाजलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको ह
निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र इँटा डिपो सञ्चालनका नाममा अवैध तथा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा १३ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । घर तथा भवन निर्माण सामग्रीहरू मापदण्डभन्दा कमतौल�
जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । प्रदेश २ को सरकारले संचालनमा ल्याएको महत्वाकाँक्षी कार्यक्रम बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान प्रति अमेरिकी सरकारले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट प्रभावित भएको अमेरिकी राजदुत -याण्डी
7 पटक पढिएको
महोत्तरी ।महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्षपदको लागि १७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । नेपाल जनमत पार्र्टीको तर्फबाट अन्जनी देवी मण्डलले उमेदवारी दिएकी छन् । त्यस्तै राप्रपा संयुक्तबाट सुनिल ठाकुर, नेपाल जनता पार्टीब
कार्यालय सहयोगी कुटेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष छविलाल हौजाली पक्राउ परेका छन्। कार्यालय सहयोगी तुलसरा सिजालीलाई निर्घात कुटपिट गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष हौजाली पक्राउ परेका हुन्। पीडित महिलाले वडाध्यक्ष हौजालीले आफूमाथि निर्�
एसएसबीको धम्की खाएर पनि मधेसीले जोगाउदै नेपाली पिलर
महोत्तरी, २७ कार्तिक । भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की सहेर पनि सीमा रक्षा गर्न पाएकामा गर्व गर्छन् ५६ वर्षीय सिकेन्द्र मुसहर । &lsquo;सीमामा बसेर हामीले पुस्तौंदेखि पिलर रक्षा गरिरहेका छौं&rsquo;, उनी भन्छन्, &lsquo;एसएसबीले बोर्डरमा बस्न दि
नेकपाका नेता र बंगालादेशी राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पार्टीका विभिन्न नेताहरु र बंगालादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिमबीच भेटवार्ता भएको छ। नागपोखरीस्थित होटेल मेरियट भएको उक्त भेटवार्ता
चितवन, कात्तिक २७ गते। बलात्कारको आरोपमा चितवनको माडी नगरपालिका&ndash;५ ब्रह्मपुरीका ४९ वर्षीय कुम्मसिंह बिक पक्राउ परेका छन्। बिकलाई गत सोमबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। उनले सोही ठाउँकै एक बालिकाल�
आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थको महत्व र वर्तमान अवस्था
जब शिशुको जन्म हुन्छ तब उसलाई आमाको दुधको आवश्यकता पर्दछ । आमाको दुधमा एउटा नवजात शिशुलाई चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वहरूको मात्रा उल्लेखनीय मात्रामा हुन्छ । शिशुलाई चाहिने पौष्टिक तत्व जस्तै ल्याक्टोज, प्रोटिन, खनिज पदार्थ,
रौतहट, कात्तिक २७ गते। राजपुर बमकाण्डको मुद्दा अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको बेला घटनाका साक्षीहरुलाई अपहरण र त्रासमा पारेर बयान फेर्न लगाइएको खुलासा भएको छ । राजपुर घटनाका घाइते भारतीय नागरिक गौरशंकर रामलाई आलम पक्षका 'मानिस' �
मंगलपुरमा कार्तिक कुँवर मेला सुरु
जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ३ मंगलपुरमा कार्तिक कुँवर मेला मंगलवारबाट सुरु भएको छ । मंगलवार विहान कलशयात्रा निकालेर मेलाको प्रारम्भ गरिएको हो । मेला भर्न टाढा&ndash;टाढाबाट सर्वसधारण आउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला रोगसम्बन्धी थप उपचार अब अमेरिकामा हुने भएको छ । यसनिम्ति उनका निजी चिकित्सक डा. दिव्यसिंह शाह आवश्यक कागजातसहित २४ गते आईतबार टर्किस एयरको दिउँसो २ः४० को उडानबाट अमेरिका पुगेर परामर्श�